Xubno cusub oo katirsan golaha wasiiradda Puntland oo la dhaarshay - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandXubno cusub oo katirsan golaha wasiiradda Puntland oo la dhaarshay
Xubno cusub oo katirsan golaha wasiiradda Puntland oo la dhaarshay
May 25, 2020 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Mid kamid xubnaha golaha wasiiradda cusub oo la dhaarinayo. [Isha Sawirka: Puntland State House]
Garoowe-(Puntland Mirror) Xubno katirsan golaha wasiiradda ayaa maanta oo Isniin ah xafiiska loo dhaarshay.
Dhaarinta ayaa ka dhacday xarunta madaxtooyada, halkaas oo uu goobjoog ka ahaa madaxweynaha Dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni.
Xubnaha, oo ay ku jiraan Wasiirka Kalluumeysiga iyo Wasiirka Warfaafinta iyo dhowr ku xigeen ayaa dhawaan laga magacaabay kadib markii Madaxweyne Deni uu isku shaandhayn kooban ku sameeyay golihiisa wasiiradda.
Puntland Minister of Environment dies after contracting coronavirus
Garoowe-(Puntland Mirror) Puntland ayaa laga yaabaa in ay lumiso mashruuc labaad oo muhiim ah sababtoo ah muran ka dhaxeeya labo haayadood oo dowladda katirsan, sida uu sheegay xildhibaan. Xildhibaan katirsan baarlamaanka Puntland Cabdikariim Xuseen Guure [...]